Inhloko ZeNdaba Zibandlela 05, 2021
Phakathi kwabantu abangamakhulu edlula amahlanu-564, abahlolwe batholakala beleCovid 19, ngokutshona kwelanga layizolo, eHarare kuphela, kufunyenwe abantu abangamakhulu phose amathathu-299 belayo. Kunje sebezinkulungwane phose ezilitshumi lasithupha- 15,829, asebehlolwe bafunyanwa belegcikwane.
Izakhamizi zeHarare ziqalile ukulandela iziqondiso ezintsha uhulumende azibekileyo kusukela lamuhla, ezeCovid 19, Level 4 Lockdown zensuku ezifika inyanga. Uhulumende uthi ukwenza emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane leli kodwa abanye bathi zizongezelela ubuyanga njalo zenziwa ngendlela ebandlulula abaswelayo.
Isiqondiso sokuba abantu bahlale emakhaya benganyakazeli enzikini yamadolobheni eZimbabwe ese Covid-19 2021 Level 4 Lockdown siqale namhlanje elizweni jikelele. Lesi siqondiso uhulumende uthi sijonge ukwenqabela ukumemetheka kweCovid-19 kodwa izakhamizi zemadolobheni zikhala ngokuthi siqhutshwa ngesandla esilukhuni sabezomvikela lamapholisa.
Obasakhulayo bathi bayasisekela isinqumo esithethwe nguhulumende sokuya kuzinga eliphezulu lohlelo lokuvalelwa kwabantu ukuthi bengahamba hambi, olweCOVID-19 level 4 Lockdown.
Ukungavunyelwa ukuhambahamba kwabantu okuqale namhla sekumise inhlelo zabezemidlalo bona abahle bathola iziqondiso ezivela kunhlanganiso ye Sport and Recreation Commission ukuba akusavunyelwa ukuqoqa kanye lokuphatheka kwezemidlalo kuze kuphele inyanga ka Zibandlela.
Ku Livetalk namhlanje kuhlelo “The Connection” uMike Hove uxoxa labatsha ngenhlupho ababhekane lazo ngalesi sikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso zeCovid 19 Level 4 Lockdown.